I-Mako shark: iimpawu, ukondla, indawo yokuhlala kunye nokuzala | Ngeentlanzi
Olunye udidi lookrebe ekudala luthathwa njengezilwanyana zokuloba kwezemidlalo yi mako ukrebe. Unenkangeleko enobundlongondlongo kunye nokuziphatha okungalunganga kunokuba ebonakala. Iphantse yabonakala ngathi abazingeli bamookrebe basenzela ubabalo, kodwa okwahlukileyo kuyinyani. Le krebe izenzele igama ngokuba ndlongondlongo kwaye iyingozi, kwaye iyeyona ntlanzi ikhawulezayo elwandle.
Kule nqaku siza kuthetha nge-mako shark kunye nazo zonke iimpawu ezinazo.
2 Inkcazo yemako shark
4 Ukuzaliswa kwakhona kwemako shark
Yintlanzi yosapho lakwaLamnidae kwaye luhlobo lwe-lamniform elasmobrach. Kukwaziwa nangelinye igama njengokrebe ogqityiweyo omfutshane okanye ukrebe omfutshane. Ngaselwandle kuthathwa njengenye yeentlobo ezinobungozi ezinobundlobongela. Ngokungafaniyo nabanye ookrebe aboyikisayo kuqala emva koko bakuhlasele, baya kukutya.
Sisilwanyana esinobukhulu obukhulu. Zikhulu ngokupheleleyo, ifikelela phantse kwiimitha ezi-4 ezinesiqingatha ubude kunye nobunzima beekhilogremu ezingama-750. Ukuba ujongana nomntu onale milinganiselo nakwintsimi yakhe, qiniseka ukuba ugqibile. Banokwakha okukhulu kakhulu kwaye bomelele.
I-muzzle yayo inde kwaye imile okwe-cone ngencam. Umlomo ngokubanzi mkhulu kodwa ucuthene. Inemihlathi emibini enamandla xa ityhoboza naluphi na utshaba.
Amehlo abo angqukuva kwaye amnyama okanye jet luhlaza ngombala. Kubonakaliswe umbulelo kumaxwebhu kunye nezifundo ezinxulumene nolu hlobo, xa zishiya umphezulu kwaye zingenamanzi okanye nantoni na yokuzihambisa, inwebu efanayo neenkophe ziphume ngamehlo ezinceda ukukhusela abafundi bazo.
Ngokuphathelele kwimiphetho yayo, inesiphetho sokuqala sasemva emva kwescapulae esimile ngokujikeleza kunye nesiphelo esitsolo. Ikwanaso nesinye isiphelo sesibini somqolo kunye nesiphelo sendlebe esincinci kakhulu ngobukhulu xa kuthelekiswa nomzimba wonke. Inezibini ezi-5 zegill kwaye zikhulu kakhulu.
Inkcazo yemako shark
Inemihlathi emikhulu kwaye inamandla amakhulu. Uyisebenzisa ukukrazula ixhoba lakhe aze azikhusele. Inobume be-cusp obunokubanakho ukuba bhetyebhetye okanye ubuncinci onokubuguqula bangaphandle. Imiphetho yemilebe igudile kwaye iyatyibilika. Uninzi lwamazinyo lukhula ngaphandle komyalelo kwaye ngamanani amakhulu. Ukubona ukrebe ngamazinyo amaninzi kwaye kungekho mgaqo ubekiweyo kuyenza yoyike ngakumbi. Amazinyo akhangeleka ngeendlela ezininzi kwaye adidekile ngokupheleleyo.
Ngokumalunga nombala we-mako shark, sifumanisa ukuba akahluki kakhulu phakathi kweentlobo okanye inkunzi okanye eyasetyhini. Ziblue mnyama kakhulu kumqolo nakwinxalenye ephezulu ukusuka embindini womzimba, ngaphandle kwenxalenye yesisu, emhlophe.
Ookrebe beMako ikakhulu batya ixhoba elincinci, ngaphandle kokucinga ngalo. Itya isardadi, mackerel, herring kunye netunny encinci. Nangona inokuhlasela ngokugqibeleleyo kwaye iphumelele kunye nezinye iisampulu eziyingozi nezinkulu, Ngobungakanani bexhoba kukho ngaphezulu kokwaneleyo. Yile ndlela, ngamanye amaxesha, ingena kumaxhoba amakhulu anjengee turtles, dolphins, porpoises kunye nezinye iintlanzi. Konke oku kuxhomekeke ekubeni uyathanda ukongeza nawaphi na ala madama makhulu okanye nokuba kukho ukunqongophala kwendawo yangaphambili.
Nokuba unayo yonke le nto siyikhankanyileyo malunga nokutya kwayo okwahlukileyo, kufuneka sitsho ukuba okona kutya kuthandwayo kukwenza okrebe yintlanzi.
Ngokumalunga nokuhlala kwayo kunye nokusasazwa kwayo, inokufumaneka kwindawo ehlala kufutshane nolwandle iAtlantic, iIndiya, kunye nePasifiki nakwezinye iindawo zoLwandle lweMeditera kunye noLwandle Olubomvu. Zizilwanyana ezikhetha ukuba semanzini kunye namaqondo obushushu aphakathi kwe-16 degrees. Ngombulelo kubuninzi nokuhamba kweentlanzi ezifudukayo ezenza ukuba le krebe itshintshe indawo ngokwamaxesha onyaka. Ukongeza, ngokulula kwabo ngenxa yezizathu zokondla, banokufudukela kwezinye iindawo ezinokutya okuninzi okanye amaqondo obushushu azinzileyo.
Nangona yenye yookrebe ababonakala kwimiboniso bhanyabhanya ebonisa amaphiko abo kumphezulu wamanzi xa bequbha okanye bezingela amaxhoba elunxwemeni, inyani kukuba bakhetha ukudada ngokuzolileyo kubunzulu obumalunga ne-500 yeemitha okanye nangaphezulu. Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba kwiminyaka yee-1970, olunye lolwandle olunelona nani liphezulu lee-mako sharks yayilulwandle iAdriatic. Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga kulo mhla akukho ngxelo yookrebe abahlala kule ndawo.
Ukuzaliswa kwakhona kwemako shark
Ukuzaliswa kwakhona kolu hlobo lukakrebe lulandelayo yi-ovoviviparous. Nanini na xa ibhinqa liphela ixesha lokumitha, iyakwazi ukuzala phakathi kwe-4 ne-8 encinci. Ezinye iisampulu zirekhodwe ezikwazileyo ukukhulula abancinci abali-16.
Xa amantshontsho aqanduselayo enika amaphiko awo okuqala Zingama-70 cm okanye ama-85 cm ubude. Iintsana ezinkulu zinokufikelela kwiimitha ezi-2. Iintsana zabasetyhini zihlala zikhulu kunamadoda. Banomdla wokuba kwisibeleko sikanina xa bezalwa emva kokophula iqanda. Kukho umdla ongena ekuveliseni kwakhona kwezi krebe kwaye yi-ophagia. Yiyo ke loo nto, xa aba bancinci bekwinkqubo yokukhula isezizimbumba, banako ukutyana. Benza oku ukuze kushiyeke okona kunamandla kwaye kunempilo kubo bonke okusalayo.
Kunokuthiwa luhlobo lokhetho lwendalo apho inzala ikhethwe inamathuba aphezulu okuphumelela kwaye ukuze bangabi "beba" izondlo kunina ngokuthi bondle abantwana abancinci ngaxeshanye.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-mako shark.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Mako ukrebe